Ukubaluleka kwemibala xa kuyilwa | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Imibala yile izinto ezibonakalayo ezinika ubomi nokwahlula okusingqongileyo. Ngaphandle kwemibala, ubomi ngebungenantsingiselo kwaye izinto ezininzi esaziyo ukuba namhlanje zingaphela, ezinje, ubugcisa okanye uyilo olusekwe kumbala. Umbala ibiyinto yokufunda sisayensi, kuba indlela yayo yokwenza kubaluleke kakhulu kwaye ichaphazela wonke umntu ngokwahlukileyo.
Umbala inamandla kangangokuba inokude ikwazi ukuvelisa iimvakalelo ezahlukeneyo kwaye inokubonisa ukusilela kwimpilo yomzimba womntu kutshintsho oluthile lokusingqongileyo. Kuko konke oku, umbala awusetyenziswanga kuphela kwaye ufundwe rhoqo ngabaqulunqi kunye nabazobi, kodwa ngamalungu oluntu lwenzululwazi.
1 Ukubaluleka kombala xa uyila
2 Enye yeencwadi ezintle kwihlabathi
Ukubaluleka kombala xa uyila
Ngapha koko 1847 injineli yaseburhulumenteni isebenzise umbala njengomgaqo wejiyometri. Kunjalo ke! Nangona kubonakala kungenakwenzeka, umbala wawusetyenziselwa ukusetyenziswa kwenye yezona ndawo zinzima kwimathematics, kuba yenye yezona zinto zilula kwaye zikhawulezayo ukukhumbula kunye nokuchonga.
Kwisazinzulu u-Oliver Byrne, ngo-1810 kwakulula ukupapasha izifundo zakhe zejiyometri ngombala, kuba ebantwini kuya kuba mnandi ngakumbi kwaye kungabi nzima kwaye kube nzima ukuyiqonda. Kwincwadi yakhe ebizwa ngokuba "Izinto zika-Euclid”Usebenzise imibala njengomthombo wakhe ophambili wengxoxo.
Ukungena kwimeko yezembali kancinci, UEuclid wayesisazi sezibalo esingumGrike, ingcali kwijometri.
Enyanisweni, U-Euclid wayesaziwa njengo "Tata wejiyometri”Kwaye usabambe isihloko nanamhlanje. Incwadi yakhe edumileyo ibizwa ngokuba yi "Elements" kwaye yenye yezona zinto zibalulekileyo ezaziwayo kwezenzululwazi kwihlabathi liphela, apho abonisa khona iimilo eziqhelekileyo njengomthombo wakhe ophambili, oko kukuthi, izangqa, oonxantathu, iinqwelomoya, imigca, njl.
Ngaphandle kwento yokuba iJometri kaEuclid isetyenziswa ngaphezu kwako konke ukufundisa kumabanga aphantsi nasesekondari, incwadi "Elements" isetyenziswe ngokubanzi kumacandelo anjengeenkwenkwezi, i-physics, i-chemistry kunye nobunjineli. Ukuza kuthi ga ngoku, iJometri ye-Euclidean iyaqhubeka nokusetyenziswa kwaye, nangona kukho iinguqulelo ezininzi, ifomathi yoqobo ayitshintshi.
Le ngcali yejiyometri ibisisiseko sokuqwalaselwa kukaOliver, injineli yaseburhulumenteni egqibe kwelokuba isebenzise ulwazi olufunyenwe kwincwadi ethi "Elements" ukuze yenze umsebenzi wayo "Elements of Euclid", eyayisekwe kwingxoxo ngombala. Ngokusisiseko into eyenzileyo yayikukutshintsha zonke iisimboli ezisetyenziswa ngokubanzi kwijiyometri ngemibala, ukuze ukufunda kube lula kakhulu.
Enye yeencwadi ezintle kwihlabathi
Incwadi ayinanjongo zemfundo kuphela, kodwa iinjongo zobuhle zikwakhona. Ngapha koko, ichazwe njenge enye yeencwadi ezintle kwihlabathi. Kungenxa yokuba isebenzisa imibala enjengombala omthubi, obomvu nohlaza okwesibhakabhaka osasazwe kwiphepha lonke kwaye nangona amanye amaphepha enamanani noonobumba kuphela, ezi ziprintwe ngombala ukuze zingalahlekwa ngumoya womsebenzi.
Amanani ejiyometri akhoyo kwaye ungabona izangqa, izikwere noonxantathu ezenziwe ngemibala eqaqambileyo nebonakalayo. Incwadi iye yaba yinto enomdla kubaqulunqi begraphic, kuba yindlela entsha kunye nesitayile yokuxuba izibalo kunye nobugcisa kunye noyilo.
Kuyabonakala ukuba uyilo lwegraphic luye njani kwiindawo ezahlukeneyo, ezinje ngemathematics noncwadi kule meko. Uhlobo aluphelelanga ekubeni yindlela yokubonisa, kodwa enkosi kule ncwadi ikwayindlela entsha esebenzayo yokufunda kwaye umbala ubusisixhobo esiphambili kwiindawo ezininzi zobomi kwaye ngakumbi umoya womntu., Kwaye kuyilo lwegraphic yiyo ithathwa njengentsika.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Imibala ibalulekile xa isiza kuyilo
Imibala emfusa, i-violet kunye ne-lilac kwihlabathi loyilo